စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး အတွက် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု လျော့နည်း ပပျောက်စေရန် ကန်ပိုက်တီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းမှာ ၁/၂ဝ၁၃ ကြိမ်မြောက် ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးကျင်းပ
အင်္ဂါနေ့ ၂၉ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၃ 10 :37 AM
ကန်ပိုက်တီး နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းရဲ့ ၁/၂ဝ၁၃ ကြိမ်မြောက် ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး အစည်း အဝေးကို ၂၅-၁-၂ဝ၁၃ နေ့ ၁၃းဝဝ ချိန် ကန်ပိုက်တီး နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်း အစည်းအဝေး ခန်းမမှာ ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ကန်ပိုက်တီး နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်း OSS အဖွဲ့ဝင် ဌာန အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ မြို့နယ်ခွဲ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ကန်ပိုက်တီး နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှ ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသူရလွင်မှ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အဓိက အခန်းမှ ပါဝင်လျက်ရှိကြတဲ့ ကုန်သည်ကြီးများ အနေဖြင့် မိမိအကျိုး၊ စားသုံးသူ အကျိုး မျှတစွာ ကြည့်ပြီး လုပ်ကိုင်ကြ စေလိုကြောင်း၊ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုများ ပပျောက် စေရေး ကုန်သည်ကြီးများ အပိုင်းမှလည်း ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ကြရန်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေး အပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ ကလည်း ကုန်တင်ယာဉ်၊ ခရီးသည်တင် ယာဉ်များအား လုံခြုံရေး သတိဖြင့် စနစ်တကျ ရှာဖွေ စစ်ဆေး သွားရန် ဆွေးနွေးခဲ့ ပါတယ်။
ကန်ပိုက်တီး နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်း တာဝန်ခံ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်လတ်မှ မြစ်ကြီးနား-ကန်ပိုက်တီး ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်း ပေါ်ရှိ ခုနှစ်ရောင်စုံ တံတားအား သောင်းကျန်း သူများမှ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ၂၆-၄-၂ဝ၁၂ နေ့မှ စပြီး ၁၆-၈-၂ဝ၁၂ နေ့ထိ ကုန်သွယ်မှုများ လုံးဝ ပြတ်တောက် သွားခဲ့ပြီးနောက် ဒေသခံ အဖွဲ့ အစည်းများ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းခဲ့ကြ သဖြင့် ၁၇-၈-၂ဝ၁၂ နေ့မှ စတင်ကာ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ အနည်းငယ် ပြန်လည် စတင်ခဲ့ကြောင်း ၁၂-၁-၂ဝ၁၃ နေ့မှ စပြီး ကျိုးကျ ပျက်ဆီးခဲ့တဲ့ တံတားကို ပြန်လည် ပြုပြင်ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ယခုအခါ ကုန်သွယ်မှုများ ပြန်လည် လုပ်ကိုင် နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ပို့ကုန်ပိုင်းမှာ တစ်သျှူး ငှက်ပျောသီးများသာ တင်ပို့ နိုင်သေးကြောင်း လမ်းခရီး တစ်လျှောက် လုံခြုံရေး အခြေအနေနဲ့ တရားမဝင် ငွေကြေး ကောက်ခံမှုများ ရှိနေကြောင်း ကြားသိရတဲ့ အတွက် ကုန်သွယ်မှုမှာ သိသိ သာသာ တိုးတက် မလာသေးကြောင်း တံတားကျိုးကျ ပျက်ဆီး ချိန်မှစပြီး ၉ လကြာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့ လစဉ် ကျင်းပနေကျ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး အစည်း အဝေးပွဲများကို ယခုလမှ စတင်ကာ လစဉ် ပြန်လည် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဘဏ္ဍာနှစ် မကုန်မီ ကျန်ကာလ များမှာ စခန်းရဲ့ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ လျာထားချက် ဒေါ်လာ သန်း ၆ဝ ပြည့်မီစေရေး ကုန်သည် အသင်းဝင် များမှလည်း ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း ပေးကြ စေလိုကြောင်းနဲ့ ကုန်သွယ်မှု လျင်မြန် ချောမွေ့ စေရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ လျာထားချက် ပြည့်မီစေရေး အတွက် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု ပပျောက်စေရေး တာဝန်ရှိသူ အားလုံးမှ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် သွားကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြား ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
တာချီလိတ် နယ်စပ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်း အဌမ အကြိမ်မြောက် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
တနင်္လာနေ့ ၂၈ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၃ 14 :27 PM
တာချီလိတ် နယ်စပ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းရဲ့ အဌမ အကြိမ်မြောက် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးနဲ့ အလုပ် အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် တာချီလိတ်မြို့ရှိ အောင်မြတ် ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ တာချီလိတ် နယ်စပ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းရဲ့ အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့သစ်များ ရွေးချယ်ခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်တဲ့ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် သစ်များကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်-
(၁) ဦးမြင့်ဦး မြင့်ဦးအောင်ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ
(၂) ဦးဌေးအောင် ရွှေနန်းတော်ကုန်တိုက် ဒုဥက္ကဌ-၁
(၃) ဦးစိုင်းစိုင်း စိုင်းရွက်ကုမ္ပဏီ ဒုဥက္ကဌ-၂
(၄) ဒေါ်နန်းစင် နေမင်းကုမ္ပဏီ အတွင်းရေးမှူး
(၅) ဦးမြင့်ဆွေ ရတနာဇေယျာကုမ္ပဏီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
တာချီလိတ် နယ်စပ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှာ အလုပ် အမှုဆောင် (၁၅) ဦး၊ အသင်းသား ဦးရေ (၁ဝ၇)ဦးနှင့် ကုမ္ပဏီ စုစုပေါင်း (၉ဝ)ဖြင့် အသင်းဝင် အင်အား တောင့်တင်းစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြပြီး၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (RUMFCCI)ရဲ့ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ အညီ အသင်း အောင်မြင် တိုးတက်ရေး၊ ရေရှည် တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး တို့အတွက် အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ အသင်းသားများမှ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ် ပီပြင်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး ဦးတည်ချက်နဲ့ အညီ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော်က အားပေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိသလို တာချီလိတ် နယ်စပ် ကုန်သည် ကြီးများ အသင်းကလည်း ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး ကဏ္ဍကို ဗဟို အသင်းချုပ်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူ ကျင့်သုံးပြီး ညီနောင် အသင်းများ ဖြစ်တဲ့ သတ္ထု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၊ ရော်ဘာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၊ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ ကျန်လုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာ စေရေး စည်းရုံး လက်တွဲ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ နေပါတယ်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝေါမြို့နယ်၊ အဗျားဗိုလ်တဲရွာ၊ ပရဟိတ စာသင်ကျောင်း တိုက်တွင် ၆-၁-၂၀၁၃ နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ ချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်မှ Mobile Team အဖွဲ့အား မီဒီယာများနှင့် အတူ သွားရောက်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ၂၃ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၃ 14:24 PM
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု ထိန်းချုပ် တားဆီးရေး ဗဟို ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်မှ စားသုံးသူ အကာအကွယ် ပေးရေး နှင့် တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်းများ စီးဝင်နေမှုကို လှုပ်ရှား ရှာဖွေ တားဆီး ထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့ကို Media များနှင့် အတူ ယခုကဲ့သို့ လာရောက် အားပေးသော အစီအစဉ် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးများ၊ UMFCCI မှ ကိုယ်စားလှယ်၊ Mobile Team ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် မိုးထဲ ရေထဲမှာ စေတနာထား လုပ်ဆောင် ပေးနေသော နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး၊ စီမံဘဏ္ဍာ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ Media အဖွဲ့များကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း၊ တရားမဝင် စီးဆင်းမှုတွေကြောင့် တရားဝင် ကုန်သွယ်မှုတွေ ကျဆင်း နေရသည် ဆိုသည့် အတွက် Mobile Team များ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ နကသ၊ အကောက်ခွန်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ကျသူများ လမ်းဘေးအိပ် လမ်းဘေးစား ပင်ပန်းကြ ပါကြောင်း၊ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခ ရောက်မှာလည်း စိုးရိမ် ပါကြောင်း၊ မရမ်းချောင်း၊ ရေပူဂိတ်များ ကဲ့သို့ ခေတ်နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် နေပြီလို့ ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးသားတာတွေ တွေ့နေရကြောင်း၊ ဖြေလျှော့မှုတွေ များလာတာနဲ့ အမျှ တရားမဝင် ဝင်လာတာတွေ များလာကြောင်း၊
စက်သုံးဆီ တရားဝင် တင်သွင်းမှု ထက်ဝက် လောက် လျော့သွားပြီး အရက်တု၊ ဆေး အတု၊ ပိုးသတ်ဆေး အတု၊ ဓါတ်မြေသြဇာ အတုများ ဝင်လာတာ များနေပြီး SMEs တွေအတွက် ထိခိုက်တယ်၊ စားသုံးသူ ပြည်သူအများ အဆင်မပြေ ဖြစ်တယ် ဆိုသည့် အတွက် Mobile Team တွေ ဖွဲ့စည်း လုပ်ကိုင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ KNU ဥက္ကဌကြီးနဲ့လည်း မိမိ တွေ့ကြောင်း၊ Workshop, Seminar တွေလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့ လုပ်ဆောင်မှုများသည် ပြည်သူတွေ အတွက် နိုင်ငံတော် အတွက် လုပ်ဆောင် နေတာဖြစ် ပါကြောင်း၊ နေရေး ထိုင်ရေးမှာ လမ်းဘေးအိပ်၊ လမ်းဘေးစား နေရတာ၊ ရာသီဥတု ဆိုးရွားတဲ့ဒဏ် ခံရတာ၊ အခက်အခဲ ရှိတာ၊ ပင်ပန်း တာတွေကို မိမိ သိပါကြောင်း၊ နှစ်လ တစ်ကြိမ် လဲပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ Mobile Team အဖွဲ့မှာ ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ Media များ၊ အသင်းအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ကြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများ အချင်းချင်း ပြေလည်ဖို့ လိုကြောင်း၊ ညီညီ ညွတ်ညွတ် လုပ်ဖို့လိုကြောင်း၊ မမှန် မကန် မလုပ်ကြ စေလိုကြောင်း၊ Clean Government, Good Governence ကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် သမ္မတကြီးက အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်း များသည် ပြည်သူတွေကို အလုပ် အကျွေး ပြုရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ဌာနများ အနေနှင့် ကလည်း ပြည်သူတွေ ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာ အမြဲသိအောင် လုပ်ပေး နေရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လိုင်စင်တွေ နေပြည်တော်မှာ လုပ်ရတာ အခက်အခဲရှိတဲ့ အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ နယ်စပ်စခန်း၊ နေပြည်တော်တို့မှာ လုပ်လို့ရအောင် စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ပို့ကုန် ဆန်ကို ယခင်က ကုန်သွယ် လယ်ယာက ပို့ဖို့ ပစ္စည်း စုရတယ်၊ ပစ္စည်း ပြရတယ်၊ Permit ရဖို့ ၂ ပတ် ၃ ပတ်ကြာ ပါတယ်၊ ခုဆိုလျှင် ဆန် လိုင်စင်ကို နေ့ချင်းပြီး ထုတ်ပေး နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ၄၆ နှစ် အတွက် ၉ လ အတွင်း ဆန် တန်ချိန် ၁ သန်းကျော် ပို့နိုင် ခဲ့ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းကြည် လက်ထက်မှာ ဆန်တန် ၁ သောင်း တင်ပို့ နိုင်ဖို့ မအိပ်မနေ လုပ်ခဲ့ရကြောင်း၊ ယခုဆန်၊ ပြောင်းက အစ ကျောက်မျက် ရတနာ အထိ M.o.U နဲ့ ရောင်းနိုင်ဖို့ လုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်စပ်မှ ဆန်တန်ချိန် ၆ သိန်း တင်ပို့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန် တင်ပို့မှု ပမာဏ များသော်လည်း စပါး ဈေးတက် မလာပါကြောင်း၊ ဒုတိယ အကြိမ် အရန်ဆန် ဝယ်ယူရန် လုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂိုဒေါင်တို့၊ ဆန်စက်တို့ လက်ဝယ် မရှိတော့တဲ့ အတွက် ပေါက်ဈေးထက် ပိုဝယ်ပေး ပေမဲ့ ထားစရာ နေရာ မရှိကြောင်း၊ တန်ချိန် ၃-၄ သောင်း အရန် ဆန် အတွက် ဝယ်ပြီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားပါသည်။
လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီး၊ စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများနဲ့ အတူ တနင်္လာနေ့တွင် တောင်သူတွေနဲ့ တွေ့ရှိပြီး ဘာအခက် အခဲ ရှိသည်ဆိုတာ မေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ ဗဟိုပြု အခြေခံ လူတန်းစား အကျိုး အတွက် လုပ်နေကြောင်း၊ စံမမီတဲ့ ဓါတ်မြေသြဇာတွေ အိတ်လဲ ထည့်ထားတဲ့ ဓါတ်မြေ သြဇာကို တောင်သူတွေ သုံးနေရတာတွေ အတွက် စိတ်မကောင်း ပါကြောင်း၊ Mobile Team သည် လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ် တင်ပေးနေတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာကြောင့် တရားမဝင် လမ်းကြောင်း ပေါ်ကနေ သွားနေရတာလဲ၊ ပြည်သူ အတွက် လုပ်တာ ပြည်သူတွေ သိဖို့လိုကြောင်း၊ အချို့က နောက်ကြောင်း ပြန်နေပြီ ရေပူ၊ မရမ်း ချောင်းခေတ် ရောက်နေပြီလို့ ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးနေတာတွေ ရှိပါကြောင်း၊ လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ် ရောက်စေ လိုကြောင်း၊ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခ မရောက် စေလိုကြောင်း၊ ဒေါသနဲ့ လုပ်တာ မဖြစ် စေလိုကြောင်း၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်း အစိုးရကြီးများထံ လွဲှပေး ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ Mobile Team ဆိုသည့် အတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ ထိုင်နေ၍ မရပါကြောင်း၊ UMFCCI က Container ချိတ်ပိတ် စနစ်လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို အကြံပြုထား ပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် လိုင်း/ အသင်း/ UMFCCI တို့နဲ့ ညှိပြီး ချိတ်ပိတ်သာ လွှတ်လိုက်ချင်ကြောင်း ယခု လုပ်ဆောင်မှု များဟာ လူနဲ့ လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘက်လိုက်မှု၊ မသမာမှုများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ မည်သူမဆို ရစ်တာ ညှစ်တာ မကြိုက်ပါကြောင်း၊ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်က လုပ်ပေး စေလိုကြောင်း၊ စိတ်ရှည် သည်းခံပြီး စည်းရုံးရေး နည်းနှင့် လုပ်ဖို့မှာကြား လိုကြောင်း အလိုလို အခွန် ဆောင်လာ စေလိုကြောင်း ရောင်းရတဲ့ ဈေးနှင့် အခွန် ဆောင်ရတာ နဲ့ဆို ဈေးမရောင်း နိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောကြ ဆိုကြ တာတွေလည်း ရှိနေကြောင်း၊ ကောင်းတာ ပြောတဲ့သူ ရှိသလို မကောင်းတာ ပြောတဲ့သူလည်း ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်သူ တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်သူ ကိုယ်စားပြု အစိုးရ ဖြစ်ဖို့ လိုကြောင်း၊ အပေါ်က ပြောင်းပေမဲ့ အောက်က မပြောင်းဘူးလို့ ပြောတာတွေ ရှိနေကြောင်း၊ မှန်မှန် ကန်ကန် လုပ်ကြ စေလိုကြောင်း ဂုဏ်ပြုချင် ပါကြောင်း၊ စီးပွားကူးသန်း၊ ပြည်ထဲရေး၊ ဘဏ္ဍာအခွန် တို့ တိုင်ပင် လုပ်ဆောင် ကြစေလိုကြောင်း မှာကြားပါသည်။
မူဝါဒ ပိုင်းမှာလည်း အကောက်ခွန်နှင့် နကသ တူညီဖို့ လိုကြောင်း၊ မတူညီလျှင် ညှိယူရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရိုးသားဖို့တော့ လိုကြောင်း၊ မရိုးမသား လုပ်တာ ကတော့ အန္တရာယ် ရှိပါကြောင်း၊ ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံ ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ဘဝဟာ ကြိုးဝိုင်း မပါတဲ့ လက်ဝှေ့ စင်ပေါ် လက်ဝှေ့ထိုး နေရတာနှင့် အလားတူ ပါကြောင်း၊ မှန်မှန် ကန်ကန်နှင့် ထိုက်ထိုက် တန်တန် လုပ်စေ လိုကြောင်း၊ အများ ပြည်သူ နိုင်ငံတော် အတွက် လုပ်နေတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ASEAN အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက Delegation အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ VOT ၁၈ ဘီလီယံ ရှိတယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံခြား ကိုယ်စားလှယ်တွေက ရယ်ကြောင်း amount နည်းလို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ မျှမျှတတ ဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစား လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးမှ မှာကြားပါသည်။
Mobile Team အဖွဲ့ကို အားပေးဖို့ လိုကြောင်း၊ အဖွဲ့ကို အမြဲ လဲလှယ်ပေးရန်၊ Media လည်း လဲပေးရန် လိုကြောင်း၊ အကြံဉာဏ် ပေးစေလိုကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှု တက်လိုကြောင်း၊ ပြည်သူတွေ အထင် လွဲမှာ စိုးရိမ်ကြောင်း၊ အခွန် ဆောင်ချင်လာအောင် လုပ်ပေး စေလိုကြောင်း၊ ဂိတ်တွေများတဲ့ အထဲ Mobile Team ကလည်း ရှိနေသေးတယ်လို့ ပြောနေကြတာ ကြားနေရကြောင်း၊ တက်ရောက် လာကြသော နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး ဝန်ကြီး၊ စီမံဘဏ္ဍရေး ဝန်ကြီးတို့ မှလည်း ဆွေးနွေးပေးရန် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးမှ အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားချက် အပေါ် ဌာန ဆိုင်ရာများနှင့် မီဒီယာများမှ အောက်ပါအတိုင်း ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့ကြ ပါသည် -
ပထမဦးစွာ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး လုံခြုံရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး သက်ထွန်းမှ Mobile Team ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Mobile Team ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်း နကသ၊ အကခ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ၊ တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် မီဒီယာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက် ပြသာနာ မရှိကြောင်း၊ သို့သော် Mobile Team ရွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုကြောင်း၊ Mobile Team ဆိုသည့် အတွက် နေရာရွှေ့တော့ ရွှေ့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နေရာအများကြီးတော့ ရွှေ့စရာမလိုကြောင်း၊ အဓိက ကျသည့် နေရာများတွင်သာ ရွှေ့ပို့လိုမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ညောင်ခါးရှည် ရေတံခါး ဝေါတို့မှာ အဓိက ကျသည့် နေရာများ ဖြစ်ကြောင်း၊ နံနက်တိုင်းလည်း ပဲခူးတိုင်း ရဲမင်းကြီးက မိမိထံ တင်ပြ အစီရင် ခံကြောင်း၊ သိမ်းဆီးရမိ ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုင်စင် ပြုလုပ်၍ ရသည့် ပစ္စည်းများ ဖြစ်လျှင် လိုင်စင် ပြန်လုပ် ပေးသည်ကို သိရှိရပါကြောင်း၊ ပုပ်သိုးလွယ် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြလိုကြောင်း၊ စပျစ်သီး၊ ဒူးရင်သီး ကဲ့သို့ ပုပ်သိုးလွယ် ပစ္စည်းများသည် ရက်ကြာသည် နှင့်အမျှ ပျက်စီး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေရေး ငွေကြေး ရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူများ အတွက်လည်း ငွေကြေး စီးဆင်းမှုကို ထိခိုက်ကြောင်း ချက်ခြင်း ဒဏ်ငွေ ဆောင်ပြီး လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့်၊ မြန်မြန် ဆန်ဆန် လုပ်ပေးနိုင်ပါက ပိုမို ကောင်းမွန်မည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ Mobile Team အဖွဲ့သည် တစ်နေရာ တည်းတွင် အတိုင် ထား၍ မရသလို ရွှေ့ရ မည် ဖြစ်သော်လည်း ရွှေ့သည့် နေရာတိုင်းတွင် လုံခြုံမှု ရှိဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ နေရေး ထိုင်ရေး စဉ်းစားပေး ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သိပ်ရွှေ့နေပါကလည်း စရိတ် တက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့တွင် တာဝန်ကျ သူများ အနေဖြင့်လည်း ကြာပါက စိတ်ပျက် စရာများ ရှိလာနိုင်မည်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ပေးစေလိုကြောင်း နှင့် အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်းသည် တရားမဝင် တင်သွင်း/ ပို့ခြင်းမှ တရားဝင ဥပဒေ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်အောင် ဆွဲခေါ် ရမှာဖြစ်ကြောင်း အကြံပြု ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး စီမံ စီးပွား ဝန်ကြီး ဦးကျော်မြင့်မှ ယခုပြုလုပ်သော စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးမှ မီဒီယာများနှင့် အတူ Mobile Team အဖွဲ့အား လာရောက် ကြည့်ရှု့၍ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်း ပေးခြင်း အပေါ် မိမိမှ အားပေး ကူညီခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားမဝင် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ Surprise Check လုပ် ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ မမှန်မကန် နည်းနှင့် ဝင်ရောက်လာသော စားသုံး ကုန်များနှင့် တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်း ဝင်ရောက်မှုများကို တားဆီးရန် ဝန်ကြီး ဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် အဖွဲ့ဖွဲ့ ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရေရှည်မှာ ဈေးကွက်ထဲသို့ ရောက်ရှိပြီးသော ကုန်ပစ္စည်းတွေ ကိုပါ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့မှသာ စိတ်ချ လက်ချ ဘေးကင်း လုံခြုံသော စားသောက်ကုန်များကို စားခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မမှန်မကန် တင်သွင်းမှုများကို လျော့နည်း စေလိုပါကြောင်း၊ မမှန်မကန် နည်းလမ်းနှင့် ဝင်လာသော ပစ္စည်းများကို ကုန်သည်များ အနေနှင့် မှန်ကန်သော လမ်းကြောင်းပေါ်က တင်သွင်းဖို့ ပညာပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ VOT တဖြေးဖြေးနှင့် မှန်မှန် ကန်ကန် တက်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဝင် တင်သွင်းလာသော စားသောက် ကုန်များကို စားသုံးတတ်သော အကျင့် ရအောင်လုပ်ပေး နိုင်မှသာ Mobile Team လုပ်ဆောင်ရခြင်း အောင်မြင်မှု ရရှိမှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်မှ ဝန်ကြီး များ၏ ယခုလို ဆွေးနွေး အကြံပြုချက်များကို ကြိုဆို ပါကြောင်း၊ မီဒီယာ အဖွဲ့၏ အင်အား ယူပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာ ရှိရှိ လုပ်ဆောင် နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်မှ ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်အခများ မှန်မှန် ကန်ကန် ရရန် မှန်ကန်သော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူများ သုံးစွဲခွင့် ရရှိရန်၊ ၂၀၁၅ AEC မှာ ကုန်စည်များ တံခါးမရှိ ဓားမရှိ ဝင်ရောက်ခြင်းအား ကြိုတင် အကာအကွယ်ပေးရန် SME များ အတွက် အခက်တွေ့ စေနိုင်သည့် အတွက် အခွန် ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ရေရှည် အားကိုးရသော ကုန်သည်များ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စားသုံး ကုန်များ FDA ထောက်ခံချက် ပါရှိမှသာ တင်သွင်းခွင့် ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံ တကာတွင်လည်း ကျင့်သုံး နေပါကြောင်း၊ ပုပ်သိုးလွယ် ပစ္စည်းများကို အမြန်ဆုံး သယ်ဆောင်နိုင်ရေး လုပ်ပေး စေလိုကြောင်း၊ အချို့နေရာများမှာ ကန့်သတ်ချက် ရှိနေသည့် အတွက် ၁ ရက် ၂ ရက် အတွင်း ပြီးစီးအောင် လုပ်ပေး စေလိုကြောင်း၊ အကောက်ခွန် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့် ညှိနှိုင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အပြင်မှာ ပြောနေကြတာက ကုန်သည် အသေးတွေ ခေါင်းရွက် ဗျတ်ထိုးတွေဘဲ အဖမ်းခံ နေရတယ်၊ အကြီးသမားတွေက လွတ်နေတယ်လို့ ကြားနေရကြောင်း၊ ပုပ်သိုးလွယ် ပစ္စည်းများ မြန်မြန် ဆန်ဆန် လွဲှပေးနိုင်အောင် လုပ်ရန်၊ လိုင်စင် အလွဲ (ဆီးသီးဟု လိုင်စင် လျှောက်ထားပြီး ဒူးရင်းသီး နဂါး မောက်သီးများ သယ်ဆောင်လာခြင်း) မကြာခဏ ကျူးလွန် နေသူကို မှတ်လောက် သားလောက်သော ငွေသားဒဏ် ရိုက်ပြီး နောင်မလုပ်ရန် စည်းရုံး ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ Mobile Team ကို အင်မတန် ကြမ်းတမ်းသော အဖွဲ့ဟု မမြင်စေချင်ကြောင်း လမ်းညွှန် မှာကြားပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်မှ ပုပ်သိုးလွယ်သည့် ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး နည်းလမ်းရှာ၍ လုပ်ပေးရန် ပြောကြားခဲ့ရာ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှနကြားရေးမှူး ဦးသိန်းဝင်းမှ လိုင်စင်တွင် မပါဝင်သော အမယ်လွဲများ ဖြစ်ပါက (လိုင်စင်တွင် ဆီးသီးဟု ဖော်ပြပြီး၊ ကားပေါ်တွင် စပျစ်သီး၊ ဒူးရင်းသီး၊ ----) ရုံးချုပ် အထိ လမ်းညွှန်ချက် ခံယူရကြောင်း တင်ပြခဲ့ရာ ဝန်ကြီးမှ ရုံးချုပ်သို့ မတင်ပြတော့ရန်နှင့် ပုပ်သိုးလွယ် သစ်သီး ဝလံများကို မြို့နယ်စည်ပင် ဒေသ အာဏာပိုင်သို့ လွဲှ၍ နောင်တော့ မပြုလုပ်ရန် ပညာပေးပြီ ဒါဏ်ငွေကို မှတ်လောက် သားလောက် ရိုက်စေ ချင်ကြောင်း၊ ရုံးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို မစောင့်စေဘဲ ဒေသ အာဏပိုင်နဲ့ ညှိပြီး လုပ်ဆောင်ရန်၊ အခွန် ဆောင်ငွေကို ဖြတ်ပိုင်း ဖြတ်စေပြီး ဝေါ ပတခမှ တစ်ဆင့် အကောက်ခွန် ပြန်လွဲှနိုင်အောင် ယခု တက်ရောက် လာသော အကောက်ခွန် ညွှန်မှူးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ကြီးဌာနတို့ထံ ပြန်လည် တင်ပြ စေလိုကြောင်း၊ မိမိလည်း ဗဟို ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်သည်များ မနစ်နာ စေလိုကြောင်း၊ သူများ နစ်နာအောင် လုပ်ရတာလည်း စိတ် မချမ်းသာကြောင်း၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ Mobile Team လို့ အမြင်မခံ စေလိုကြောင်း၊ ကုန်သည် ဆိုသည်မှာ ကိုယ့်ပြည်သူပဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာပေး ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတောင် ရိုက်ချင်ကြောင်း၊ အဓိကမှာ ပုပ်သိုးလွယ် ပစ္စည်းများ မြန်မြန် ပြန်လွှဲ ပေးနိုင်ရန် လိုကြောင်း၊ မပုပ်သိုးတဲ့ ပစ္စည်းလည်း မြန်ဖို့လိုကြောင်း၊ နောင်ဆို ချိတ်ပိတ် စနစ်နှင့် လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ရှိကြောင်း၊ လုပ်စရာ အများအပြား ရှိကြောင်း မမှန်မကန်သော ပစ္စည်း ဆေး အတု၊ ဆီ အတုများ စားနေရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အသင်း အဖွဲ့၊ မီဒီယာ၊ ဌာန ဆိုင်ရာ ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများ မှလည်း စိတ် ရှည်ရှည်ထား ဆက်ဆံရမည ဖြစ်ကြောင်း လမ်းညွှန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်လေးမှ မိမိတို့ အနေနှင့် ကုန်သည် အငယ်များ လုပ်သာ ကိုင်သာ ရှိစေရန် Individual Trading Card လုပ်ခွင့် ပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်သည်များ အပိုင်းမှလည်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာကြဖို့ လိုအပ် ပါကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ဒွန်းမှ ID တစ်စောင်နှင့် ကားအစီးစီး သွားခြင်း အတွက် ရှေ့ကားတိုင်းတွင် ID မိတ္တူပါရမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ကားတွင် မူရင်း တင်ပြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်သည် ပိုင်းကလည်း မိမိတို့ လုပ်ရမည့် အပိုင်းကို လုပ်ဆောင် ပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ITC ကတ် ထုတ်ပေးရန် အတွက်လည်း မြဝတီကုန်သည် အသင်းမှ အသင်းဝင် ကတ်ကို မြန်မြန် လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
အကောက်ခွန် ညွှန်မှူးမှလည်း အကောက်ခွန် ဝန်ကြီးထံ Mobile Team ကိစ္စ၊ ပုပ်သိုးလွယ် ပစ္စည်း အတွက် မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် တင်ပြ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် တင်ပြခဲ့ ပါသည်။
ဆက်လက်၍ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်မှ အကောက်ခွန်၊ နကသ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ နေ့တိုင်း အစည်းအဝေး ထိုင်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိလည်း နောင်ကို တစ်လ တစ်ကြိမ် လာရောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်း လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ်ရောက်သွား ပါက ဒေသ အာဏာပိုင်ကို လွဲှပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မြန် လွဲှပေးချင်ကြောင်း၊ ဗဟို ကော်မတီနှင့် ဆုံးဖြတ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိက ခေါင်းရွက် ဗျတ်ထိုးဈေးသည် ကုန်သည် အငယ်စားလေး များသာ မိပြီး၊ ကုန်သည်ကြီးများ လွတ်နေသည် ဆိုသည့်သတင်း၊ ပုပ်သိုးလွယ် ပစ္စည်း ပျက်စီးသည် ဆိုခြင်း ယခင် ရေပူ၊ မရမ်းချောင်း ခေတ်ကို ပြန်သွား နေချင်သည့် သတင်းများကို မဟုတ် မမှန်ကြောင်း ပြည်သူ ထင်သာ မြင်သာ ရှိအောင် ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင် ပေးကြစေ လိုကြောင်း၊ ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင် ပေးသည့် အဖွဲ့ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုလိုကြောင်း၊ စည်းရုံးရေး အသွင်နဲ့ လုပ်စေချင်ကြောင်း၊ မိသားစုများ ဒုက္ခ ရောက် သည့် အဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေလိုကြောင်း၊ အချင်းချင်း ညီညွှတ်အောင် လုပ်ကြရန်နှင့် ကုန်သည်များ မိမိတို့ကို မြင်သည်နှင့် အခွန် ဆောင်ချင်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် အတွက် လုပ်ခြင်း ဖြစ်၍ အသိအမှတ်ပြု ပါကြောင်းနှင့် အဖွဲ့ အတွက် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများလည်း ပံ့ပိုးပေးရန် လမ်းညွှန်မှာ ကြားပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး တိုင်း ရဲမင်းကြီး မြဝင်းမှ Mobile Team အဖွဲ့မှာ ပြည်ထဲရေး၊ အကောက်ခွန်၊ နယ်စပ်၊ ရဲ၊ မီဒီယာ အားလုံး ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လုံခြုံရေး ပိုင်းတွင် တာဝန်ယူ ရပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်း အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူ ထင်သာ မြင်သာ ရှိဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခင် မဆလခေတ် ကတည်းက မှောင်ခို ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်မှု ရှိကြောင်း၊ ကားပေါ်၊ ရထားပေါ်၊ လမ်းခရီးတွင် ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိသော်လည်း ဈေးကွက်ထဲ ဆိုင်ပေါ် ရောက်သွားပါက တရားဝင် ပစ္စည်း ဖြစ်သွားကြောင်း၊ ယခုဆိုလျှင် without ကားများက အစ တရားဝင် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေကြောင်း၊ လူတိုင်း တော်တော် များများ အလွယ်တကူ ဈေး သက်သာစွာနဲ့ ကားစီးနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်မှ ဖြေလျော့ ပေးနေတာများ အတော်များများ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပစ္စည်း အစစ်နဲ့ ဈေး သက်သာစွာ သုံးစွဲနိုင်အောင် ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် မီဒီယာများက ကူညီ ပေးစေ လိုကြောင်း၊ ပညာပေး ကာလတွင်ပင် အမြန် လမ်းမကြီး အတွင်း လုံခြုံရေး ဧရိယာ ၁၇၆ မိုင် အတွင်း တားဆီးပါက မောင်းပြေးတာများ ရှိကြောင်း၊ နောင်ပိုင်း ခြိမ်းခြောက်ထား၍ မောင်းမပြေးရဲ တော့ကြောင်း၊ တရားဝင် လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်အောင်၊ အခွန် ပေးဆောင်ချင်အောင် လုပ်ဆောင် ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အခွန် ဆောင်ရသည့် အတွက် ရှုံးမသွားအောင် ဆောင်ရမည့် အခွန်များ နေပါကလည်း ဆောင်ချင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရန် မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များနဲ့ ဝေါမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မမှန်မကန် လုပ်တာ ရှိလျှင်လည်း အကြောင်းကြား ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ News Watch စောင့်ကြည့် ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် ဒေါ်မေငယ်မှ လှည်းကူးတွင် ဖမ်းဆီး ထားသော ကား ၅ စီးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိ အခြေအနေ သိလိုကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ ပါသည်။ တိုင်းရဲမင်းကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မြဝင်းမှ ခေတ္တ သိမ်းဆည်း ထားသော ကား ၅ စီး ကိစ္စကို အင်းတကော် ရဲစခန်းသို့ တင်ပြပြီး တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ သတင်းထောက် ဒေါ်မေငယ်မှ ဆက်လက်၍ FDA စစ်သည့် ကိစ္စအား သိလိုကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ ပါသည်။
နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးညွန့်အောင်မှ စားသောက် ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ FDA စစ်ဆေးပြီး Brand ဖြစ်ပါက လိုင်စင် ထုတ်ပေးပြီး လိုင်စင် ထုတ်ပေးသည့် အခါတိုင်းလည်း FDA ထောက်ခံချက် ပါရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း FDA မပါရှိပါက လိုင်စင် မပေးကြောင်း၊ မြဝတီတွင် ပစ္စည်း နမူနာပေး၍ FDA ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပစ္စည်း တစ်ခုကို FDA ထောက်ခံချက် ၂ နှစ် ခွင့်ပြုပြီး FDA ထောက်ခံချက် ရရှိပြီး ပစ္စည်းကို ကုမ္ပဏီ တစ်ခုတည်း သာမက အခြား ကုမ္ပဏီကပါ တင်သွင်း နိုင်ပြီး တင်သွင်း တိုင်းလည်း နမူနာနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ဒွန်းမှ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လိုင်စင် လုပ်ခွင့်ရှိသော အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးများကို FDA ထောက်ခံချက်နှင့် ခွင့်ပြုသော်လည်း လိုင်စင် ခွင့်မပြုသော ပုစွန်ဖြူ၊ ကြက် အသည်း အမြစ် စသည့် ပစ္စည်းများကိုမူ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ပေါ်ပြူလာ နယူးဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် ဦးပြည့်ဖြိုးကျော်မှ ကန့်သတ်ကုန် (၈) မျိုးကို ဖြေလျော့ခွင့် ပြုရာတွင် ချောကလက်၊ ဝေဖာနှင့် chewing – gum မပါဝင် သေးကြောင်းနှင့် ဈေးကွက်တွင် ဝယ်လို့ရပြီး စားလို့လည်း ကောင်းကြောင်း လူကြိုက်လည်း များကြောင်း လိုင်စင် ခွင့်ပြုပေးစေ လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် မှလည်း ခွင့်ပြုပြီး ဖြစ်၍ လုပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး ITC ကတ် အကြောင်း ဆွေးနွေး ပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်လေးမှ ITC ကတ်ကို တမူး စခန်းတွင် စတင် လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးလျှင် တစ်ပတ်ကို ကျပ် ၅၀ သိန်းဖိုး ခွင့်ပြုကြောင်း၊ မြဝတီတွင် ITC ကတ် ၉ ဦး ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ကုန်သွယ်မှုမရှိသေးကြောင်း မြဝတီမှ ကုန်သည်များမှာ တရားဝင် ရောင်းဝယ်မှုတွင် အားမသာကြောင်း Mobile Team က စစ်ဆေး တွေ့ရှိမှသာ လိုင်စင် လုပ်မည်ဆိုသည့် စိတ် သဘောထား ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့ စည်းရုံးတာ ၂ ကြိမ် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင်က မလုပ်ချင်ကြောင်း၊ မှောင်ခို လို့ပြောလျှင် မကြိုက်ကြောင်း၊ ပိုက်ဆံ ပေးဝယ်ပြီး အရောင်း အဝယ် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက် မှောင်ခို လုပ်သည်ဟု မခံယူကြောင်း၊ ဒေသခံတို့၏ အရိုးစွဲနေသော သဘောထားကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။ ဝေဖာ၊ ချောကလက် ကိစ္စလည်း FDA က ထောက်ခံချက် ရလျှင် ကန့်သတ်ရန် မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး မော်ဒန် ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် ဦးဇင်သော်က မေးမြန်းရာတွင် Mobile Team အနေဖြင့် FDA ကို သီးခြား ခေါ်ထားတာရှိသလား? Mobile Team လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ချက် ကွဲလွဲမှုကို သိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ ပါသည်။
နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးညွန့်အောင်မှ Mobile Team မှာ လိုင်စင်တွင် အခု ၁၀၀ ပါရှိပြီး တကယ် သွင်းသည့် အခါ ၂၀၀ ဖြစ်နေပါက ပိုနေသော ၁၀၀ ကို ခဏ ထိန်းသိမ်းထားပြီး လိုင်စင် ပြန်လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လိုင်စင်တွင် မပါသော Brand ဖြစ်ပါက ထိန်းထား လိုက်ပြီး မြဝတီတွင် FDA စစ်ပြီး လိုင်စင် ပြန်လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုပ်သိုး လွယ်ပစ္စည်း များကို အခွန် ရှောင်ပြီး တင်သွင်းသူကို ဒဏ်ရိုက်၊ ပြန်လွှတ်၊ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ် အမြဲတမ်း မှောင်ခို လုပ်နေပါက မဖြစ်ကြောင်း၊ အနီးဆုံးမြို့တွင် FDA ထားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တိုင်းရဲမင်းကြီး မြဝင်းမှ ပြောကြားရာတွင် ယခု အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ရေပူ၊ မရမ်းချောင်း ဂိတ်များ ကိုဖြုတ်ပေးကြောင်း၊ မရမ်းချောင်း ဂိတ်ကို ရှောင်ကွင်းပြီး သွားတဲ့ ကားများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ယခု နောက်ပိုင်း မဖမ်းတော့ကြောင်း၊ မူးယစ် ဆေးဝါးများကို သတင်းပေးလျှင် ဖမ်းဆီးကြောင်း၊ အထက် ဌာန ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ထို့အပြင် Mobile Team အနေဖြင့် အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့သာ ထားရှိပြီး နယ်စပ် ပေါက်များမှ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများမှာ များပြားသဖြင့် လုံလောက်မှု ရှိပါသလား ? မေးခွန်း အပေါ်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်မှ လွှတ်တော်တွင် တရားမဝင် တင်သွင်းမှုက တရားဝင်ထက် နှစ်ဆကျော် များကြောင်း၊ သို့ပါ၍ တရားမဝင် တားဆီးရေး အတွက် ဗဟို ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန် ဗဟို ကော်မတီတွင် ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ ဒေသ အာဏာပိုင်များ၊ မီဒီယာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မှောင်ခို လုပ်ငန်း လုံး၀ ပပျောက် မသွားတောင် လျော့နည်း သွားအောင် လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ ဆွေးနွေး ထားကြောင်းနှင့် ယခု Moblie Team ဖြင့် စစ်ဆေး လုပ်ဆောင်သည့် အချိန်တွင် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ သန်း ၁၈၀ တက်လာကြောင်း၊ တရားမဝင် လုပ်တာကို ဌာနများ အဆက်ဆက်က မလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ နောင်တွင် ပင်လယ် ရေကြောင်းကိုပါ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း နိဂုံးချုပ် အားဖြင့် ယခု လာရောက် အားပေးသည့် အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ကြောင်း လိုအပ်သည် များကို ပံ့ပိုး ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း FDA ကိစ္စကိုလည်း လိုအပ်သည့် နေရာများတွင် တစ်ခုစီ ထားပေးဖို့ စီစဉ် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြန့်ကြာသည့် ကိစ္စများကိုလည်း ဆောင်ရွက် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အခွန်ကို ညှိပေးဆို ညှိပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုံးထဲမှာ ထိုင်နေရင် ဒီအခြေအနေတွေကို သိနိုင်မည် မဟုတ်သည့် အတွက် ယခုကဲ့သို့ အောက်ခြေသို့ ဆင်းလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အခုလို လာရောက် ပေးခြင်းဟာ အချိန် အခက်အခဲ ငွေအခက်အခဲ ရှိသော်လည်း လာရောက် ကူညီပေးနိုင်သည့် အတွက် ဝမ်းသာကြောင်း၊ ဆက်လက် ကူညီ ပေးစေလိုကြောင်း နိဂုံးချုပ် ပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို ၁၂ : ၃၀ ချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ ပါသည်။
မွန်တို့ ဌာနေ ရာမည တွင် “ကုန်သွယ်မှု နည်းလမ်း၊ အခွင့်အလမ်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
အင်္ဂါနေ့၊ ၂၂ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၃ 14:34 PM
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်း၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မွန်ပြည်နယ် ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းမှ ဦးဆောင် ကျင်းပသော “မွန်ပြည်နယ်၏ ကုန်သွယ်မှု နည်းလမ်း၊ အခွင့်အလမ်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ” ဆွေးနွေးပွဲ အား (၁၉-၁-၂၀၁၃) ရက်နေ့ နေ့လည် (၂)နာရီ မှ (၅)နာရီ ထိ Mawlamyine Stand Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ တွင် ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ် ကျင့်သုံး လာသော မူဝါဒများနှင့် အညီ တရားဝင် ကုန်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် သိရှိ ရမည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ နှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတများကို လေ့လာ သိရှိ နိုင်စေရန် နှင့် လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အား သိရှိနိုင် စေရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဂဏန်းလုပ်ငန်းရှင် အသင်း ဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဌ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်/ စက်မှု အသင်းချုပ် တွဲဖက် စာရင်းစစ်/ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ဦးနှင်းဦး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်လွင်ဦး နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဥပဒေပညာရှင် ဦးသိန်းညွှန့် တို့မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှု (“Panel Discussion”) ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဆွေးနွေးပွဲသို့ လုပ်ငန်းရှင်များ ၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ စုစုပေါင်း (၇၀)ကျော်ခန့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြီး သိလိုသည်များအား မေးမြန်းခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စီးပွားဖြစ် ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများ ထူထောင်၍ ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန် စေရန် ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။ ၁၆ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၃ 17:45 PM
အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉:၃၀ အချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွန်း တို့မှ ဦးဆောင်၍ ဌာဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့များ၊ ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များ ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသရှိ ပြည်သူများ အပါဝင် တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၎င်းဆွေးနွေးပွဲသို့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်လေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ထူးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများ ရရှိရေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး၊ မြို့ပြ ကျေးလက် ဒေသများ တန်းတူ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ အင်းလေးကန် ဒေသ စိမ်းလန်း စိုပြေရေး စသည့် တို့ကို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ် ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင် များနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူ လူထုတို့မှ ကုန်သွယ်မှု နှင့် ပတ်သက်သည့် သိရှိလိုသည် များကို မေးမြန်းကြရာ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်တို့မှ ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ ကြပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ညနေ ၄:၃၀ တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
itadmin (စရအ- နယ်စပ်/ဦးစီး)